Tsy Nisy Akony Ny Sarintsarim-pitsitsiana Nataon’ireo Shinoa Mpitarika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2013 6:58 GMT
Nipongatra indray taonjato maro taty aoriana ilay fehezanteny filamatra hiadiana amin'ny kolikoly ‘Lovia efatra, Lasopy iray’ noforonina tany ampiandohany fony Amperoran'ny Fanjakana Ming (1368–1644) tao Shina, Zhu Yuanzhang. Ireo fampahalalam-baovao an'ny fanjakana [zh] dia nampiasa ilay fomba fiteny mba hamaritana sakafo tsotra iray noraisin'ny Filohan'ny Antoko Kaominista Xi Jinping tany Hebei faritany any avaratr'i Shina tamin'ny 29 Desambra 2012.
Ny sakafo tao anaty lisitra, izay navoaka tety anaty aterineto, dia maneho filaharan-tsakafo shinoa tsotra toy ny akoho nahandroina tamin'ny afo malefaka sy kisoa miaraka aminà lasopy korzety mamimamy. “Nangataka manokana izy ny tsy handrosoana zava-pisotro ho azy,’’ hoy ny vakin'ny tatitra.
Fitsitsiana am-pitandremana Noderaina
Anatinà firenena iray izay efa fahazarana ny manolotra hanim-pitoloha rehefa misy fitsidihan'ny manampahefana, tena hita nanohina ny fon'ireo mpanao gazetim-panjakana maro ny fitsitsiana nataon'i Xi. Kanefa, ilay tatitra antsipirihany mikasika ny sakafo “Lovia efatra, Lasopy iray” dia tsy nahavita nandresy lahatra loatra ireo ety anaty aterineto. Raha ny mpisera sasany ety anaty aterineto mihevitra an'i Xi ho nampiseho ohatra tsara, maro kosa no mihevitra fa tsy dia ilaina taterina loatra ilay tantara satria izany no tokony ho fenitra fanao.
Tsy vao sambany akory ireo mediam-panjakana no nidera fotoana “mampihetsi-po” nolalovan'ireo mpitondra vaovao toy izao. Tamin'io andro io ihany, rehefa nitatitra momba ny fitsidihan'ny Praiminisitra Li Keqiang tany aminà vohitra iray, dia nanindry [zh] ny mediam-panjakana Xinhua fa nijoro taorian'ireo mponina tao am-bohitra i Li nandritra ny fotoana iray nakàna sary, fitondrantena tsy dia fahita loatra amin'ireo Shinoa mpitarika izay matetika no eny anoloan'ny olona ‘salama saina’ no mijoro.
dikasarin'ny tatitra tamin'ny TV momba ny sakafo “Lovia efatra, Lasopy iray” noraisin'i Xi, avy ao amin'ny Youku
Niteraka valinteny henjana avy amin'ireo mpisera anaty aterineto tao amin'ny Sina Webo sy ny tontolon'ny bialogy ny ezaka tsy tapaka ataon'ireo mediam-panjakana hanome endrika mahazatra kokoa an'ireo Shinoa vaovao mpitarika azy. Ireto ambany ireto ny sasany tamin'ireo fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpanoratra sy mpikatroka mafàna fo ety anaty aterineto [zh]:
岳中海: Raha tapa-kevitra ireo manampahefana ny hamela ny “fomba maingitraingitra”, dia mila mitondra tena toy ny olon-drehetra, toy ny hoe miandry ny jiro mena [vao miampita], mipetraka aminà hotely tsotra ary mihinana sakafo tsotra, nahoana no ilaina taterina ny momba izany? Ilay tatitra fotsiny dia efa mampiseho fa fitondrantena tsy fahita firy ny toy izany.
在打盹: Mandreraka ahy ny fampielezan-kevitra toy ny “Lovia efatra, Lasopy iray”. Tsy mijery tsotra izao ny tena olana atrehana aty Shina amin'izao fotoana, toy ny tsy fahampian'ny fitokiana, ny fitotongan'ny toe-tsaina, ny kolikoly, ny olan'ny tontolo iainana, ny olan'ny fahatoniana ara-tsosialy sy ny fiahiana ara-pitsaboana.
连鹏: Rehefa tsy raisina intsony ho toy ny “vaovao” deraderain'ny media na ny mpamaky ny “Lovia efatra, Lasopy iray” sy ny “Fijoroana ao an-damosin'ireo mponina eny am-bohitra rehefa maka sary”, dia izay isika vao hanana ny tena fivoarana. Ny rafitra iray ahafahana manara-maso ny fitondrana dia manan-danja kokoa noho ny mpitarika iray manam-pahendrena, azo antoka kokoa ny rafitra iray anaraha-maso ny manampahefana noho ny mpitondra iray mahay
作家草军书: Marobe ny vahoaka shinoa no mora tohina amin-javatra kely sasany ataon'ireo manampahefana, na dia tokony ho raisina tahaka ny zavatra mahazatra aza ireny, toy ny hoe mihinana sakafo tsotra, miandry ny jiro mena [fandrindràna fifamoivoizana] ary ny mandoa am-paosy ny sakafo nohaniny. Ka tsy tokony ho izany ve no fitondrantenan-dry zareo e? Tsy misy ilàna mitatitra an'izany mihitsy; ampy handrisika olona ny “Lovia efatra, Lasopy iray” , aza aetry ho aminà toetra manaram-poana manoloana ireo manampahefana ny soatoavintsika.
矮巴马: [Maneho ny tatitra toy izao fa] zatra nentina toy ny andevo isika. Apetratsika mandrakariva amin'ny hafa ny momba antsika, noho izany dia tsy andrintsika ery ny hanànana tompo be fiantra. Raha ny marina, eo an-tanantsika ny momba antsika.
Bright113：Rehefa ny firenena iray no tohina aminà hetsika iray araka ny tokony ho izy, dia efa tsy araka ny tokony ho izy ity firenena ity izany.